Kenya oo joojisay duulimaadyada galbeedka Afrika – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kenya oo joojisay duulimaadyada galbeedka Afrika
A warsame 17 August 2014
Iyadoo ay ka sii darayso xaaladda cudurka Ebola ee Galbeedka Afrika ayaa shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways waxa ay ku dhawaaqday in ay joojisay duulimaadyadii ay ku tegi laheyd ama kaga iman laheyd wadammada Sierra Leone iyo Liberia.
In ka badan kun qof ayaa u geeriyooday caabuqa Ebola. Ilaa iyo haddana Kenya lagama helin kiisas cudurka Ebola ah.
Todobaadkii la soo dhaafay Hay’adda Caafimaadka Adduunka ayaa Kenya ku dartay wadammada halista ugu jira inuu ku faafo cudurka Ebola, waxayna sabab uga dhigtay iyada oo Kenya ay tahay marin muhiim u ah duulimaadyada qaaradda.
Shirkadda ayaa sii wadaysa duulimaadyada ay ku tagto Nigeria halkaasi oo ay afar qof ugu geeriyoodeen caabuqa Ebola. Joojinta duulimaadyada shirkadda waxa ay bilaabanaysaa maalinta Arbacada ah.
Shirkado kale oo diyaarado ayaa horayba u joojiyay duulimaadyadii ay ku tagi jireen wadamada uu cudurkasi Ebola uu saameeyay, waxaana ka mid ah shirkadahaasi British Airways
Cabsida laga qabo in caabuqa uu ku fido meelo ka baxsan Galbeedka Afrika ayaa sii kordhaysa, iyadoo wadammada uu caabuqa saameeyayna ay si tartiib ah uga go’doomayaan dunida inteeda kale.
Waxaana aad ugu sii adkaanaysa howlwadeenada caafimaadka inay gaaraan wadammada sida aadka ah looga baahan yahay.
Jimcihii hay’adda samafalka ee dhakhaatiirta aan xudduuda laheyn ayaa ka digtay in Ebola faafida cudurku uu ku socdo xawaare ka badan awoodda dowladaha, waxayna sheegtay in xakameynta cudurkan ay qaadan karto ugu yaraan muddo lix bilood ah.
Mandera: Dabley afduubtay shaqaale kadibna baaratay
Xildhibaano iyo odayaal cambaareey weerarkii lagu qaaday Axmed Daaci